Ogaden News Agency (ONA) – Muxaadaro diini ah oo lagu qabtay xerada Dhagaxlay – Hoos ka dhagayso
Posted by ONA Admin	/ May 18, 2013
Maalintii shalay oo ay taariikhdu kubeegnayd 16/05/2013 waxaa xerada qoxootiga dhagaxlay ee deegaanka dhadhaab lagu qabtay muxaadaro aad u qiima badan oo ay qabteen ururka culima owdiiinka oo katirsan jaaliyada ogadenia ee xerada kahowlgasha.
Ururka culima owdiinka ogadenia ee xerada dhagaxlay oo la aas’aasay horaantii sanadkii 2012 ayaa howlo aad ubalaadhan kaqabtay guud ahaan deegaanka dhadhaab gaar ahaan xeda dhagaxlay,
Hadaba ururka culima owdiinka ee faraca midnimo ayaa muxaadaro balaadhan shalay kuqabtay xerada waxaana kasoo qayb galay dad wayna aad utiro badan oo kakala yimid taafyaha xerada
Muxaadaradan oo ahayd mid mudo lasugayay ayaa furantay abaare 2:00 duhurnimo waxaana furay gudoomiyaha culima owdiinka sh cali waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in laga hadli doono 4 mowduuc oo kala ah jihaadka, samirka, balanta iyo adeecida umarada ama madaxda,
Waxaana lagu soodhaweeyay sheikh c/lahi oo kahadlay jihaadka iyo samirka wuxuuna sheekhu kudheeraaday jihaadka iyo fadliga uu leeyahay iyo waliba sida loodoonayo in laga faa’iidaysto wuxuu sheekhu sheegay in qofkasta oo u dhashay wadanka ogadenia ay waajib cayni ah kutahay in uu jihaado naf, maal, iyo maskaxba sheekha oo aad uga hadlay jihaadka ayaa wuxuu macneeyay erayga jihaad oo dadkii madasha fadhiyay u iftiimiyay micnaha erayga jihad iyo meesha uu kayimid dadkii madasha shirka fadhiyay oo dhalinyaro u badnaa ayaa iyagu noqday kuwo aad uladhacay muxaadarada sheekha iyo qiimaha ay leedahay
Sidookale sheikh c/laahi ayaa kahadlay samirka iyo ajarka kusugan wuxuuna dadkii dhagaysanayay u sheegay in lagu sabro dhibaatooyinka uu gumaysigu kuhayo wuxuuna sheegay in allaah ugu badalidoono sabarkooda ajar aad utiro badan wuxuuna sheikhu tilmaamay qaybaha uu samirku ukalabaxayo oo dhowr qaybood ah sheekha ayaa dadkii dhagaysanayay kubaraarujiyay in ay aad usabraan kuna sabraan jidka xaqa ah.
Sidoo kale waxaa lagusoo dhaweeyay sheikh C/raxmaan oo kahadlay balanta iyo adeecista madaxda wuxuuna sheekhu aad ugu dheeraaday balanta oo la’ilaaliyo ajarka iyo xasanaadka kujira iyo balanta oo laburiyo dhibaatada iyo cawaaqib xumada ay keento wuxuuna dadkii madasha shirka fadhiyay kuladardaarmay in ay ilaaliyaan balanta iyo axdiga.
Sheekha ayaa sidoo kale kahadlay adeecitaanka madaxda ama amiirkaaga oo la maqlo faa’iidada kujirta iyo amiirkaaga oo lamaqli waayo cawaaqib xumada ay uleedahay qofka falkaas kukaca wuxuuna sheekhu dadka kuladardaarmay in ay maqlaan madaxdooda kana maqlaan waxkasta oo aan kahor imanaynin diinta islaamka.
Labada sheikh ayaa sidookale kawada sinaa cabsida allaah oo ay dadka xasuusinayeen iyo allaah oo laga cabsado faa’iidada kujirta iyo cida allaah kabaqiwayda ciqaabta ay mudanayso.
Sidookale dadkii madasha fadhiyay ayaa loo ogolaaday in su’aalo waydiiyaan culimada waxaana lasu’aalay su’aalo aad ubadan isla markaana muhiim ahaa kuwaas oo way culimada sidiiniyan ah uga jawaabeen kuna qanciyeen dadkii saa’iliinta ahaa.
Sikastaba ha’ahaatee shirka ayaa soogaba gaboobay iyadoo ay dadku doonayeen in muxaadaradu siisocoto laakiin wakhtiga ayaa gabaabsi noqday kadib markii la aqimay salaadii casar.